မြန်မာဖေါင့် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မြန်မာဖေါင့်. Show all posts
Xiaomi Lollipop MM & COC Font installer
ဈေးကွက်ထဲ ၀င်လာတဲ့ Xiaomi Device တွေထဲက Lollipop version ပါရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ အတွက် Myanmar Zawgyi နဲ့ COC Zawgyi Font ထည့်သွင်း ပေးမယ့် Tool လေးပါ။
ကျွန်တော် Redmi Note 2, Mi Note Pro နဲ့ Mi4i တို့မှာ စမ်းသပ် အဆင်ပြေပြီး ပါပြီ။
အဆိုပါ ဖောင့်သွင်းဖို့ Phone မှာ Root Access ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
▼ Download Xiaomi Lollipop MM & COC Font installer ▼
Down ရတဲ့ zip ကို ဖြည်ပါ ပြီးရင် Folder ထဲမှ Computer ပုံ .exe လေးကို Double Click အသုံးပြုပြီး ဖွင့်ပေးပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါ
Reboot ကျပြီး ပြန်တက် လာရင် မြန်မာစာရော COC မှာပါ အဆင်ပြေနေ ပါလိမ့်မယ်။
Created by Aung Khaing (MMAS)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 05, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
How to Install TWRP / Without Root Myanmar Font & Root Galaxy S6 Edge on Android 5.1.1
Samsung Galaxy S6 Edge ကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာစာ သွင်းချင် သူများနဲ့ Root လိုအပ် သူများ အတွက်ပါ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Root မလုပ်ပဲ မြန်မာစာ သွင်းနိုင်ရန်
လိုအပ်တာ လေးတွေ အရင် Download ရယူ လိုက်ပါ။
TWRP recovery - Samsung Galaxy S6 Edge 5.1.1 TWRP.tar
Final Solution 3.0 +Zawgyi-Base.zip
Odin Tool - One Click Download
အရင်ဆုံး TWRP recovery ကို Flash ပေးရပါမယ်။
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Odin ကို အရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။
Odin က PDA ဆိုတဲ့ နေရာမှာ TWRP recovery.tar ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီ ဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကို သိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေး နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပါဝါပြန်တက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ TWRP recovery သွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
ဖုန်းထဲကိုဖြစ်ဖြစ် SDcard ထဲကို ဖြစ်ဖြစ် Final Solution 3.0.zip ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို recovery mode ၀င်ပြီး Final Solution 3.0.zip ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းကို Zawgyi Font Build-in ထည့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် ပြီးဆုံး ပါပြီ။
မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ပါပြီ။
Root ပါ ထပ်လုပ် ချင်ရင်တော့ SuperSU-update.zip လေးကို recovery mode ကနေပဲ install ထပ် လုပ်ပေး လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Root accept ပါ ရပါပြီ ခင်ဗျာ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, September 01, 20154comments:
ကဏ္ဍ Android, Root, Samsung, မြန်မာဖေါင့်
MIUI အမျိုးစား အတွက် မြန်မာဖောင့် ချိန်ချာ Apk လေးပါ မြန်မာမိုဘိုင်း ဂရုကနေ တွေ့လို့ တင်ပေး လိုက်တာပါ။
အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် လိုအပ်ရင် အသုံးပြုလို့ ရအောင် ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
အသုံးပြုမယ်ဆို Root ထားဖို့တော့ လိုမယ်ဗျာ ဖောင့်ထည့်မယ် ဆိုရင် Frozen Keybook ပါ တစ်ခါတည်း သွင်းပေး ထားပါတယ်။
Mi Note နဲ့ Redmi Note 3G အမျိုးစားကတော့ အိုကေတယ်တဲ့ဗျာ ...
▼ userscloud မှာ ဒေါင်းယူပါ ▼ OR ▼ my.pcloud မှာ ဒေါင်းယူပါ ▼
Ref>>>Myanmar Mobile Users Group
ကဏ္ဍ Miui, မြန်မာဖေါင့်
Sony Android ဖုန်း တွေအတွက် SONY Zawgyi Installer v1.0.4 (Version 2.3.6 to 4.3)
Sony 2.3.6 ကနေ 4.3 အထိ Support ပေးပါတယ်
SONY အတွက် အဓိက ပြုလုပ် ထားပါတယ်၊
အခု Version မှာ SONY XPERIA FONT INSTALLER v1.0 မှာ 2012 ICS(4.0.4) အတွက် ( -ျ ) အပေါ်မတက်အောင် လုပ်ပေးဖို့ ကျန်သွားတာကို ပြန်ပြင်ပေး ထားပါတယ်။
Android 4.3 များအတွက် SONY font ကို ထပ်ဖြည့် ထားပါတယ်
4.3 သုံးတဲ့ သူတွေက နံပါတ် ၈ က SONY font ကို Install လုပ်ရမှာပါ၊ အခြားဖောင့်သုံးရင် -ျ -ာ တွေ ကပ်နေ တာမျိုး ဖြစ်မှာပါ၊
4.1 နှင့် အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းတွေက နံပါတ်စဉ် ၂ နဲ့ မြန်မာစာ အလွဲများပြင်ရန် လိုအပ်ပါမည်၊
မည်သည့် Font မှ မပျက်စေဘဲ မိမိအသုံးပြုချင်သည့် Font အမျိုးအစားကို ရွေးချယ် သုံးနိုင်အော င်စီစဉ်ထား ပါတယ်
မြန်မာစာ လွဲနေတဲ့ အခါ ပြင်ပေးဖို့ ထပ်ဖြည့် ထားပါတယ်( Credit to: ကိုကျော်ဇောနိုင်)၊ မြန်မာလွဲနေ တာလေးတွေ မှန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Font Installer မှာ ရွေးချယ်စရာ ၀ မှ ၁၁ အထိ အဆင့်(၁၂) ခုရှိပါတယ်။
Bagang Keyboard Install လုပ်ရန်
SmarZawgyiPro font ကို Install လုပ်ရန်
SmartZawgyi v3.0 font ကို Install လုပ်ရန်
DanceZawgyi font ကို Install လုပ်ရန်
Flower Font ကို Install လုပ်ရန်
Sanpya Font ကို Install လုပ်ရန်
SONY font ကို Install လုပ်ရန် ( Android 4.3 များအတွက် )
ZawgyiGhost Font ကို Install လုပ်ရန်
မြန်မာစာ အလွဲများပြင်ရန် နံပါတ်စဉ် ၂ ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် App error များဖြစ်လျှင်၊ Libharfbuzz.so ကို restore ပြန်လုပ်ရန်။
ဖုန်းကို Reboot ပြုလုပ်ရန်
FONT INSTALLER ကို Exit လုပ်ရန်
မှတ်ချက်။ နံပါတ်စဉ် ၃ မှ ၉ အထိသည် font install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ နှစ်သက်ရာ နံပါတ်စဉ်က font အမျိုးအစား တစ်ခုပဲ install လုပ်ရန် လိုအပ် ပါသည်။
SONY Android version ICS(4.0.x) မှ JB(4.1.x)(4.3) အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၁။ ( -ျ) တွေလည်း အပေါ်တက်တာမျိုးမဖြစ်ပါ။
၂။ မည်သည့် system font မှလည်းမပျက်စေပါ။
Credit to : MPX
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, August 26, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Sony, မြန်မာဖေါင့်
Final Solution 3.0 ( Zawgyi Base )
Samsung ဖုန်းများ အတွက် Zawgyi Font အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းနိုင်ရန် Font များကို အလွယ် တကူ ဖန်တီးပေးနေကျ ဖြစ်တဲ့ Ko Aung Thura မှ အခု version 4.3 မှ 5.1.1 ထိ Zawgyi Font ထည့်သွင်းနိုင်ရန် Final Solution နဲ့ Zawgyi font apk / Zawgyi Font ttf များကို ထပ်မံ မျှဝေပေးလိုက် ပြန်ပါပြီ။
Final Solution 3.0 မှာ ဆိုရင်တော့ -
💮💮 TotalSolution 3.0 ( ZawgyiBase )
✔ Samsung Android 5.1.1 Fonts Database Update
✔ Samsung Android Version 4.3 ~ 5.1.1
Samsung Zawgyi Keyboard မြန်မာ Language
( S6 rom တင်ထားရင်တော့ Unicode – မြန်မာ Language & Keyboard ပါရမယ် )
🌟 Zawgyi Font
ယပင့် ဝဆွဲ ထပ်ပြင် ထားခြင်း များကို ထပ်မံ ပြုပြင်ပေး ထားပါတယ်။
ထည့်သွင်းနည်း ကတော့ အရင် အတိုင်းပါပဲ။ Custom Recovery ကနေ zip file ကို install ပေးရုံပါပဲ။
apk နဲ့ ttf အတွက်ကတော့ အောက်ကလင့်မှာ Download ရယူလိုက်ပါ။
apk >>> http://www.mediafire.com/download/lehzz99cyo176e6/MyanmarZawgyi-AungThura%28iFont%29.apk
ttf >>> http://www.mediafire.com/download/99zg934n59jwpaj/MyanmarZawgyi-AungThura.ttf
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 17, 20152comments:
ကဏ္ဍ Android, Samsung, မြန်မာဖေါင့်
OnePlus2ဖုန်းကို TWRP Recovery သွင်းနည်း ၊ မြန်မာစာ ထည့်နည်း
OnePlus2ဖုန်း ၀ယ်ယူ ထားသူတွေ အတွက် TWRP Recovery သွင်းနည်း ၊ မြန်မာစာ ထည့်နည်း တို့ကို တင်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ စမ်းသပ် ပြီးသားပါ။ တစ်ဆင့်ချင်း အဆင်ပြေပြေ လုပ်ဆောင် ကြည့်နိုင် ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကွန်ပျူတာမှာ OnePlus2 Driver သွင်းရ ပါမယ်။ OnePlus2 ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး PC Suite တွေ သုံးတာတို့ ၊ Recovery သွင်းတာ ၊ Bootloader Lock / Unlock လုပ်ဖို့ ဆိုရင် ကွန်ပျူတာမှာ OnePlus2 ကို သိစေမယ့် Driver Package သွင်းထားမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Driver Software ကို အောက်က Link မှာ ရယူပါ။ ဒီ Driver Package ဟာ OnePlus ဖုန်း အတွက်တင် မဟုတ်ဘဲ အခြားသော Android ဖုန်းများ အတွက်ပါ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Download လုပ်လို့ ရလာတဲ့ exe file ကို ဖွင့်လိုက်ရင် “Do you want to install ADB & Fastboot Driver (Y/N)” ဆိုပြီး မေးပါ လိမ့်မယ်။ Y လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
နောက်ထပ်တွေ မေးရင်လည်း Y တွေသာ ရိုက်ပြီး Enter တွေပဲ ခေါက်သွားပါ။ Driver သွင်းပြီး ရင်တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ C:\_ အောက်မှာ adb ဆိုတဲ့ folder လေး ကိုလည်း တွေ့ရ ပါပြီ။
Driver သွင်းတဲ့ အဆင့်က ဒီမှာတင် မပြီးသေး ပါဘူး။ မိမိရဲ့ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာက သိအောင် ဆက်လုပ်ရ ပါဦးမယ်။
ပြီးလျှင် မိမိရဲ့ဖုန်း setting ထဲက Developer Option ထဲက USB Debugging ကို On ထားပါ။ ပြီးလျှင် ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို USB ကြိုးဖြင့် ချိ်တ်ဆက်ပါ။
ပြီးလျှင် My Computer icon ကို right click နှိပ်ပြီး Manage ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ပုံထဲက အတိုင်း ADB Interface နေရာမှာ “!” သင်္ကေတလေးနဲ့ ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
ယင်း “!” သင်္ကေတ နဲ့ ADB Interface ဆိုတာ ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီး Update Driver Software ကိုနှိပ်ပါ။
Browse My Computer for Driver Software ကိုနှိပ်ပါ။
“Let me pick fromalist of device drivers on my computer” ကိုနှိပ်ပါ။
Android Device ကို Select လုပ်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
ADB Interface ကို Select လုပ်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Driver သွင်းတဲ့ အဆင့် ပြီးပါပြီ။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ zip file လေးကို Download လုပ်ပါ။
Download Total Solution Zip File
Download ရယူထားတဲ့ zip file လေးကို ဖုန်းရဲ့ Internal Storage ထဲကို Copy ကူးထည့် ထားပါ။
ဖုန်းကို Bootloader Unlock လုပ်ရပါမယ်။ C:\_ ထဲက adb folder ထဲကို ၀င်ပါ။ adb folder ထဲက လွတ်နေတဲ့ တစ်နေရာမှာ Shift Key နဲ့ Right Click ကို တွဲနှိပ်ပါ။ Open Command Window Here ကို ရွေးပါ။ Command Box ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီမှာ adb reboot bootloader လို့ ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Enter ခေါက်ပါ။
ဖုန်းက Fastboot Mode ထဲကို ရောက်သွား ပါမယ်။ Fastboot mode ထဲကို ရောက်သွားပြီ ဆိုရင် fastboot oem unlock လို့ရိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် enter ခေါက်ပါ။
ဖုန်းက auto reboot ကျသွား ပါမယ်။ ဖုန်းကလည်း bootloader unlock ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဖုန်းက ပုံမှန် အတိုင်းပြန်တက် လာပြီ ဆိုရင် Setting > Developer Option ထဲကို ၀င်ပြီး USB Debugging ကို ပြန် On ထားပါ။ Bootloader Unlock ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ TWRP Recovery သွင်းပါမယ်။ ဖုန်းကိုလည်း ကွန်ပျူတာ ကနေမဖြုတ် ပါနဲ့ဦး။ Command ရိုက်နေတဲ့ Command Box ကိုလည်း မပိတ်ပါနဲ့ဦး ။ ခဏထားလိုက်ပါ။
OnePlus2 အတွက် TWRP Recovery ကိုအောက်က Link မှာရယူပါ။
Download TWRP Recovery for OnePlus2
Download ရယူထားတဲ့ TWRP Recovery file လေးကို C:\_ ထဲက adb folder ထဲမှာ သွားထည့် ထားပါ။ ပြီးရင် ခုနက Command ရိုက်လက်စ Command Box မှာ adb reboot bootloader လို့ ရိုက်ပါ။
ဖုန်းက fastboot mode ထဲ ရောက်သွားပြီ ဆိုရင် fastboot flash recovery oneplus2twrp_recovery.img လို့ရိုက်ပါ။ ဖုန်းထဲကို TWRP Recovery သွင်း ပါလိမ့်မယ်။
Recovery သွင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ fastboot reboot လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ဖုန်းက reboot ကျသွားပြီး ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်တက် လာပါမယ်။
ပြီးရင် ခုနက Command ရိုက်လက်စ Command Box မှာ adb reboot recovery လို့ရိုက်ပါ။
အောက်ပုံထဲက အတိုင်း TWRP Recovery ထဲကို ရောက်သွား ပါမယ်။ Install ကိုနှိပ်ပြီး အပေါ်ကအဆင့် တစ်ခုမှာ တုန်းက ဖုန်းရဲ့ Internal Storage ထဲကို ထည့်ထား ခဲ့တဲ့ total solution zip file လေးကို ရွေးပေးပြီး Bar လေးကို Swipe လုပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းထဲကို မြန်မာစာ သွင်းပါ လိမ့်မယ်။
ပြီးရင်တော့ Reboot System လုပ်လို့ ရပါပြီ။ ဖုန်းမှာ မြန်မာစာလည်း သွင်းပြီး ပါပြီ။
ဖုန်းက ပုံမှန် အတိုင်း ပြန်တက် လာပြီ ဆိုရင်တော့ မြန်မာလို ရေးထားတာ တစ်ခု ခုကို ဖုန်းထဲမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ စာရိုက်ဖို့ ကတော့ Android မြန်မာ ကီးဘုတ် တစ်ခု ခု သွင်းပြီး မြန်မာလို ရိုက်ကြည့်ပါ။ OnePlus2 မှာတော့ Frozen Keyboard2လေးနဲ့ဆို တော်တော် လှပါတယ်။ ကျွန်တော့် OnePlus2 မှာတော့ Frozen Keyboard2ကို သွင်းထား ပါတယ်။
Frozen Keyboard2ကို ရယူလိုရင်တော့ အောက်က link မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Download Frozen Keyboard2for Android
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 14, 20152comments:
ကဏ္ဍ 1+1, Android, Recover, မြန်မာဖေါင့်
Honor 3C Hol-U10 များအတွက် မြန်မာစာ မှန်စေမဲ့ Bat Tool
Honor 3C Hol-U10 တို့မှာ မြန်မာစာ အဆင် မပြေ သူများ အတွက် မြန်မာစာ မှန်စေမဲ့ Font Tool လေးကို Ko Saing Maung မှ New Year လက်ဆောင် အဖြစ် ရေးပေး လိုက်ပါတယ်...
ဒီ Tool လေးကို အသုံးပြုဖို့ ဖုန်းမှာ Root ရှိဖို့ လိုပါမယ် ဖုန်းကို Pc နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကီးဘုတ်မှ 1 ကို နှိပ်၍ Enter ခေါက်ပေးပါ ဖုန်း reboot ကျပြီး ပြန်တက် လာရင်တော့ မြန်မာစာ အဆင်ပြေပါပြီ။
လိုချင်ရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
By : Saing Maung
Original link - https://www.facebook.com/saingmaung
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, July 25, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Honor, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
မြန်မာစာ မှန်ချင်သူများ အတွက်
မိမိဖုန်းမှာ မြန်မာစာ အဆင်မပြေ သူများ အတွက် အဆင်ပြေ စေရန် phyo chan ရေးသား ထားသော MM AIO Font ကို တင်ပေး လိုက်တာပါ။
COC game မှာ မြန်မာလို အဆင်မပြေ ပါက ဒီapplication ကို install လုပ်ပြီး မိမိဖုန်း version အလိုက်ရွေး၍ smart ဇော်ဂျီ ရွေးပြီး replace roboto ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဖုန်းပိတ် သွားပြီး ပြန်ဖွင့်လာတဲ့ အခါ
မြန်မာစာ COC မှာ အဆင်ပြေ ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာစာ ချို့ယွင်းတဲ့ G730 ဖုန်းတောင် မြန်မာစာ COC မှာ ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။
မိမိ ဖုန်းမှာတော့ root ဖောက် ထားရ ပါမယ် ခင်ဗျာ။
Original link - www.techniquehelper.blogspot.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, July 03, 2015 No comments:
2015 New Year လက်ဆောင် ZawgyiOne 2015 နဲ့ Final Solution 3.0
မြန်မာ(ZG) ကရင် မွန် ရခိုင် ရှမ်း Fonts
Samsung Devices များအတွက် install ပြီး FontStyle မှာပြောင်းသုံးရန်
▼ ZawgyiOne 2015 apk ▼ and ▼ Exodus2 apk ▼
အခြား ဖုန်းများ အတွက် ifont ( donte ) မှ ပြောင်းသုံးပါ။ Computer မှာလည်း install ပြီး Font Change သုံးလို့ ရပါသည် ..
▼ ZawgyiOne2015.ttf ▼
Custom Recovery ( cwm or twrp ) မှ install Clash Of Clan မြန်မာစာ ရေးလို့ ရ
Lollipop Support Zawgyi
မြန်မာ ( ZG ) ကရင် မွန် ရခိုင် ရှမ်း စာသုံးလို့ရ
စာထပ် စာလုံး ကပ်နေ ပါက system / csc ထဲက feature.xml ကို ဖျက်ပေးပါ။
Android Version အလိုက် ကြည့်ယူပါ ..
▼ For Android 4.3 ▼ and ▼ For Android 4.4.2 and 5.0 ▼
လိုအပ်ချက်များ ရှိနေပါက ပြောပြ ပေးပါ ကြိုးစားပါဦးမယ် ..
နှစ်သစ်မှာ ဝမ်းမြှောက်နိုင်ပါစေ ..
လိုအပ်တာတွေကို လိုသလို ယူနိုင်ပါပြီ ..
ပြန်လည်မျှဝေလိုသူတွေ ကျေးဇူးပြု၍ Name တွေကိုတော့ edit မလုပ်ပါနဲ့ ..
Credit – Font Owner Ko Aung Thura (MMUG)
ကဏ္ဍ Android, PC-Software, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
Non-Jailbreak iOS Device များတွင် မြန်မာစာ ရရှိအောင် ပြုလုပ်နည်း
iOS 8.1.3 နှင့် iOS 8.2 တို့ဟာ လတ်တလော ချိန်ထိ Jailbreak မရှိသေးတဲ့ အတွက် မြန်မာစာကို နေရာ တိုင်းမှာ မမြင်ရဟု ပြောနေ ကြသူများ အတွက် မြန်မာစာကို နေရာ တိုင်းမှာ ရရှိအောင် ပြုလုပ်နည်းကို တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်...
Non-Jailbreak အတွက် Mobile Configuration Font များစွာ ရှိသော်လည်း အများစုမှာ Safari Browser မှာ မြင်ရခြင်း မရှိသေး ပါဘူး.. အခြားသော Apps များမှာတော့ မြင် ရပါတယ်...
၁ ။ App Store သို့ဝင်ပါ..
၂ ။ Search မှ Sar Lone Keyboard ဟူ၍ရေးထည့်ကာ Install လုပ်ပါ... (သို့မဟုတ် အောက်တွင်ပေးထားသော Link မှတဆင့် App Store မှသွားရောက်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်)
▼ Sar Lone Keyboard ▼
၃ ။ Install လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ Sar Lone Keyboard App ကို ဖွင့်ပါ... စဖွင့် လိုက်သည်နှင့် Font ကို Download လုပ်ခိုင်း ပါလိမ့်မယ်... လုပ်ပေး လိုက်ပါ
၄ ။ ပြီးရင်တော့ အောက်က ပုံမှာတွေ့ ရတဲ့ အတိုင်း Profile တစ်ခုကို Install လုပ်ခိုင်း ပါလိမ့်မယ်... Install နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
၅ ။ Profile ဟာ Unverified Profile ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် Warning Message တခု ထပ်တက် လာပါ လိမ့်မယ်... ကိစ္စ မရှိပါဘူး Install သာနှိပ်ပေးပါ။
၆ ။ Install နှိပ်ပြီးရင် Device မှာ Lockscreen Passcode ချထား ပါက အဆိုပါ Passcode ကို မေးလာမည် ဖြစ်ပြီး ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်.. အကယ်၍ မချ ထားပါက ထည့်စရာ မလိုပါ။
၇ ။ ဒါ ဆိုရင်တော့ Zawgyi Profile လုပ်ပေးပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. Done ကို နှိပ်ပါ
အခု ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Non-jailbreak iDevice ရဲ့ Mail App မှ လွဲ၍ နေရာ တိုင်းမှာ မြန်မာစာကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် Mobile Safari မှာတော့ မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေနဲ့ မမြင်ရသေး ပါဘူး... ဒါ့ကြောင့် ဆက်လက် ဖတ်ရှု ကြပါကုန်...
Safari ကို ဖွင့်လိုက်ပါ.. ထို့နောက် ပုံတွင် ပြထားသည့် အတိုင်း Share Button ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Extension မှ More ကို ရွေးပါ။
More ကို ရွေးပြီးလျှင် Zawgyi Force ကို ဖွင့်ပေး ထားလိုက်ပါ.. (ပုံမှာတော့ ပိတ်ထားပါသေးသည်)
Zawgyi Force ကို ဖွင့်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Safari Extension မှာ Zawgyi Force ကို မြင်တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ မြန်မာစာကို အခု ဆိုရင် Safari မှာပါ မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်.... မြန်မာWeb page တခု ခု ၀င်တာနဲ့ မြန်မာစာ နေရာမှာ လေးထောင့် အတုံး (သို့မဟုတ်) ကြက်ခြေခတ် ပုံများ ဖြစ်နေ ခဲ့ရင် Share Button ကိုနှိပ်ပြီး... Extension မှ Zawgyi Force ကို တစ်ချက်နှိပ် ပေးလိုက်သော အခါ မှာတော့ အဆိုပါ သင်ဖွင့် ထားတဲ့ Web Page မှာ မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
အခု ဆက်ပြီးတော့ မြန်မာ ဇော်ဂျီ အလှ Font ကို Install လုပ်ဖို့ တင်ပြပေး ပါမယ်.. ဒါမှသာ နေရာတိုင်း နေရာ တိုင်းမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်ကို လှပစွာ ဖတ်နိုင်မှာပါ။
အောက်တွင် ပေးထားသော အလှFont ၂ခုမှ တစ်ခုကို Mobile Safari မှ ဖွင့်ကာ Direct Download လုပ်ရုံနဲ့ Profile ကို Install လုပ်ခိုင်း ပါမယ်... လုပ်ပေး လိုက်ပါ...ပြီးလျှင် Device ကို Reboot ချပါ...
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ dropbox.com ▼
From : http://www.iosknowledgebank.info/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, April 12, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, ဖုန်းနည်းပညာ, မြန်မာဖေါင့်